Ny Kirin 810 dia ho tonga amin'ny 21 Jona ho toy ny Huawei 7nm SoC | Androidsis
Ny 810nm Kirin 7 dia nanamafy fa halefa amin'ny 21 Jona ho avy izao!
Miaraka amin'i Nova 5 andiany, Ny Kirin 810 dia hisantatra ny laharana voalohany ho an'ny processeur 7nm faharoa an'ny orinasa sinoa, araka ny fanamafisana nomen'ny tompon'andraikitra ambony an'ny mpanamboatra. Ny voalohany tamin'ity karazana fananganana ity dia ny Kirin 980, SoC izay natao ho an'ny finday avo lenta an'ny Huawei sy Honor ary natomboka tamin'ny faran'ny volana aogositra lasa teo.
Ity chipset vaovao ity dia hanome hery an'ireo finday avo lenta izay manana fahombiazana avo indrindra amin'ny orinasa, noho izany el Kirin 710 mety hiala sasatra indraindray satria hanana zoky izy izay hanana bebe kokoa hatolotra.
He Gang, ny filohan'ny orinasan-tseraseran'ny mpanjifa ao Huawei dia nahazo baiko nanambara tsy ara-potoana izany Kirin 810 hambara any Whuan, Sina. Ity koa dia mametraka ny orinasa ho voalohany eto amin'izao tontolo izao manana amin'ny katalaoginy System-on-Chip an'ny haitao fananganana voalaza ary ny Qualcomm sy Mediatek haingana indrindra, tamin'ny fahazoana an'io anaram-boninahitra io.
Kirin 810 dia nanamafy fa hanomboka amin'ny laharana voalohany amin'ny andiany Nova 5 an'i Huawei
Arakaraka ny maha-nanometana kely an'ny chipset no mahomby kokoa. Izany dia misy fiantraikany, mihoatra ny zava-drehetra, ny fahombiazan'ny angovo sy ny fotoana fanodinana. Noho izany, afaka manantena fahombiazana lehibe amin'ny Kirin 810 isika, avo kokoa noho ny an'ny Kirin 710 ary mety ho an'ny an'ny Snapdragon 730G, Processeur midadasika mahery indrindra an'ny Qualcomm amin'izao fotoana izao ao amin'ny 8nm.
Na izany aza, tsy mahalala antsipiriany bebe kokoa momba ity sombiny manaraka ity izahay. Na dia izany aza, na dia be aza ny faniriana hihaona aminy, telo andro monja aorian'ny fandefasana azy isika. Noho izany dia tsy hijaly ela isika. Amin'ny 21 Jona dia ho fantatsika ny toetra sy ny fikafika teknikan'ity SoC midadasika ity Premium.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny 810nm Kirin 7 dia nanamafy fa halefa amin'ny 21 Jona ho avy izao!